Oriental Highway မှ BOT စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်သော မန္တလေး - လားရှိုး - မူဆယ် အာရှလမ်းမကြီး (သို့) ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး
Monday, 06 November 2017 00:00	Written by Super User
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Scot Marciel ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံခြင်း
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန နှင့် လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင် သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Scot Marciel ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ(၂၇-၁၀-၂၀၁၇)မေယုတောင်ကျော် (၂)လမ်း တည်ဆောက်မှုရခိုင်ဒေသတွင် ဆောင်ရွက်မည့် လမ်းတံတား စီမံကိန်းများရခိုင်ဒေသ ပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းများတွင် ကျေးရွာများ နေရာချထားရေး စီမံကိန်းများရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ မြို့များတွင် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေး စက်ရုံများ တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်နေမှုများကျေးရွာများထိ မီးလင်းရေး စီမံကိန်းများဒေသနေပြည်သူများ အလုပ်အကိုင် ဖန်တီးပေးနိုင်မှု အခွင့်အလမ်းများနှင့် ဆက်စပ်သည့် စီမံကိန်းများဒေသတွင်း လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကာလတို ကာလရှည် စီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် ကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေးကြပါသည်။
ရတနာပုံမြို့သစ် တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်း ကော်မတီ၏(၂/၂၀၁၇) အစည်းအဝေး
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန နှင့် လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင် သည်
ရတနာပုံမြို့သစ် တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်း ကော်မတီ၏(၂/၂၀၁၇) အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်
Falam on 14.10.2017 - Reed Road, Child-Falam Hakha, Falam Township Road (Part) and the child-spirit stick-Falam roads
Falam on 14.10.2017 - Reed Road, Child-Falam Hakha, Falam Township Road (Part) and the child-spirit stick-Falam roads were inspected Deputy Minister for Construction U Kyaw Lin, Chin transport minister and MP's aunt caught DDG members Khin Maung Kyaw, DDG U Khin Maung Swe, CE Khin Zaw and Chin State Department, Powered by officials from the Department of medium. Falam on 14.10.2017 - Reed Road, Child-Falam Hakha, Falam Township Road (Part) and the child-spirit stick-Falam roads were inspected.
Paved road capacity and coordination
Deputy Minister for Construction U Kyaw Lin, Chin transportation with the MP's aunt caught on 12- 10-2017 members Chin State Department and rural children, officials from the Department of medium-Hakha, Falam - Deny (Child-martial section) Deny martial Tedim Tedim Tonzang waist-shirts, which were inspected. Deputy check water conditions to be renovated and the open season order to improve road conditions.Furthermore, bitter Tedim-shirts road 90 kilometers from Zam Pi village Paved road capacity and coordination.
ချင်းပြည်နယ် လမ်းတံတားလုပ်ငန်းများ ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးကျော်လင်း၊ ချင်းပြည်နယ် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝနိကြီးနှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ကျင်ငိုက်မန် တို့သည် ၁၂- ၁၀-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ချင်းပြည်နယ် လမ်းဦးစီးဌာနနှင့် ကျေးလတ်လမ်းဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ လိုက်လျက် ကလေး - ဖလမ်း - ဟားခါးလမ်း (ကလေး - သိုင်းငင်းအပိုင်း)၊ သိုင်းငင်း - တီးတိန်လမ်းနှင့် တီးတိန် - တွန်းဇံ - ကျီခါးလမ်းတို့အား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ကြပါသည်။ ထိုသို့စစ်ဆေးရာတွင် ဒုတိယဝန်ကြီး မိုးရေတိုက်စား၍ ပြန်လည်ပြုပြင်ရမည့် အခြေအနေများနှင့် ပွင့်လင်းရာသီတွင် လမ်းတိုးတက်ပြုပြင်ရမည့် အခြေအနေများကို မှာကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် တီးတိန် - ကျီခါးလမ်း ၉၀ ကီလိုမီတာမှ ဇမ်ပီးကျေးရွာသို့ ကျောက်ခင်းလမ်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးတို့ကို ညှိနှိုင်းပေးခဲ့ပါသည်။
Thahtone - Hpann - Kawkareik - Myawaddy Road Map
Published in	နိုင်ငံတကာအစိုးရအဖွဲ့များ
မိုးမောက်-လွယ်ဂျယ်လမ်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး လမ်းညွှန်မှာကြား
J&M Steel Solutions Shipping Out Ceremony သို့တက်ရောက်